Nagu saabsan - Shenzhen Yuebaixiang Technology Co., Ltd.
Yue Baixiang Teknolojiyada Kooxdaayaa beerayay tikniyoolajiyada dhimista-goynta muddo 20 sano ah, iyada oo si xawli ah u sameysay, qorista aqoonyahanno, go'aansaday in ay noqoto dhimasha-dhimista ugu wanaagsan Shiinaha, adduunkana ka dhigto howl-qabad dhimis dhimis adag. Warshaddeenu waxay daboolaysaa aag ka badan 3,000 oo mitir murabac ah. Waxaa jira in kabadan 100 talanti oo ah R&D iyo wax soo saar.
Waxaa jira ku dhowaad 50 mashiinno xardhan mindi wareegsan oo ah CNC wareegsan oo la soo dhoofiyay, mashiinno laser ah, mindi fidsan oo ah mashiinnada baaritaanka mindi wareega iyo qalabka cabbiraadda saxda ah. Mindida Etching, caaryada qalabka, caaryada QDC, saxanka kuleylka kulul, saxanka xardho korantada, qalabka haysa, mindi alwaax ah iyo mindi caag ah, guddiga elektarooniga ah, iwm.
Yue Baixiang wuxuu ku dhex jiray warshadaha caaryada minida muddo 20 sano ah wuxuuna soo aruuriyay khibrad caafimaad oo qani ah. Waqtigan xaadirka ah, in ka badan toban geeddi-socod ayaa helay shahaadooyinka patent-ka qaranka. Marka lagu daro aqoon u lahaanshaha qalabka taleefanka gacanta, badeecadaha adag iyo saxsanaanta badan (sida biraha naxaasta ah, bireedka aluminiumka, foornada qasacadaysan, birta oksaydhka, siligga mesh birta ah iyo biraha kale iyo caagga silikooniga ah, xaashida garaafka, UPE Long), PC, PVC , PET iyo qalab kale si loo gaaro hawlgal otomaatig ah) oo nadiif ah oo hagaagsan marka la eego qashinka saarista, 100% xasilloon oo waara! Dhammaan caaryaduhu waxay soo mareen saddex illaa afar tijaabooyin adag (baadhitaanka mindi mindi, kormeer mindi sare iyo mid hoose, baaritaanka alaabta dhinta)
Qanacsanaantaadu waa baacsigayaga joogtada ah. Waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno shirkadaada si aan uga wada faa'iideysano oo aan u gaarno xaalad guuleysata! Ku soo dhowow macaamiisha cusub iyo kuwii horeba inay soo booqdaan oo ay hagaan, isla markaana si wadajir ah u horumariyaan tikniyoolajiyadda caaryada u dhinta! Yue Baixiang waxay rajeyneysaa booqashadaada iyo hagidaada!
Waxaa jira 50 nooc oo ah mashiinnada farsamaynta saxda ah ee CNC, qalabka leysarka baaxadda weyn leh, mashiinka toosan ee mindi-u laabaya iyo 10 nooc oo mashiin xardho ah, khadadka isku-darka dhinta iyo qalabka baaritaanka 3-cabirka ah ee shirkaddayada.
Waxaan haynaa koox xirfadlayaal R&D ah.
Iyadoo 20 sano oo khibrad xirfadeed ah berrinka.
Fududeyn dhammaystiran oo gaaban wakhtiga hagaajinta qalabka iyo hagaajinta wax soo saarka wax soo saarka.
Waxyaabaha saxda ah ee la gooyo ee saxda ah iyo muuqaalka jilicsan ee alaabooyinka daabacaadda ayaa la soo saari karaa iyada oo la adeegsanayo baaritaanka iyo codsiga Dhimashada.
Khadadka isku-darka ah ee loo yaqaan 'Die-cut' isku dhafan iyo qalabka feerka, ayaa habeyn kara badeecadaha oo tijaabin kara dhimashada macaamiisha.
Adduunyadu yaanay ku dhinin jarid adag oo adag.
U horseedi caaryada mindi si aad u noqoto warshad qiimo leh adduunka.
in uu noqdo kii ugu horreeyay ee warshadaha caaryada mindi ku sameeya ee Shiinaha sannadka 2024.
damiir leh oo dhaqso ugu dhegan balanta.
Dhaqan tayo leh
Tayada badeecadu waxay u dhigantaa dabeecada.
hufnaan, hal-abuurnimo, masuuliyad, koox, daacadnimo.
Laser dhinta, Qashinka-Daadinta Soo-saarista Rotary Die, Maaskarada Rotary Die, Auto-Waxyaabaha Buuxinta xardho dhinto, Muraayadda Dusha sare ee Muraayadda oo Dhinta, Birta xardho steel,